Ikhaya elimangalisayo eKostrena kunye neWiFi kunye namagumbi okulala ayi-0
UNovasol unezimvo eziyi-121 zezinye iindawo.
EKostrena kufutshane neRijeka ezo zindlu zintle kwaye zinefenisha entle zikhona. I-CKA201 kunye ne-CKA202 zibekwe kumgangatho osezantsi kwaye zabelana ngeterrace kunye ne-barbecue. Kumgangatho wokuqala kukho i-CKA200 ene-terrace enembono, i-whirlpool, i-barbecue kunye nobude obuncinane besilingi yi-120cm. Omathathu amagumbi asebenzisa indawo yokuzivocavoca ekumgangatho ophantsi. I-promenade entle ilinde wena e-Kostrena kunye neelwandle. Ezona zidumileyo zise: Žurkovo Bay, emva koko Smokvino, Svežanj, Spužvina, Podražica, Nova voda kunye nePerilo.
Umgama: indawo yokuhlala ekufutshane 5 m / ithuba lokuloba 230 m / ivenkile 500 m / ivenkile yokutyela 200 m / idolophu ekufutshane(Rijeka) 4 km / amanzi(Ilitye/ePebble beach) 230 m